Guraandhalaa 23, 2021
Somaaliyaan Tokkummaan Emireetota Arabaa sabatiinsa Afriikaa nagaa irra kan buusan ejjennoo siyasaa fi hiriiraawwan mormii tuqate jechuun yakkite. Muddamni jiru kan madde filannoo prezidaantummaa fi falmii beekkannaa prezidaantichaa irraa ti.
Hoogganoota garee mormituutiin torban darbe mormii hookkaraan guutame geggeessame irraan kan ka’e sabatiinsi siyaasaa dhabamuu isaaf kan itti gaafatamu Tokkummaa Emiretota Arabaa ti jechuu dhaan mootummaan federaala Somaaliyaa himatee jira
Angawoonni Moqaadishoo keessaa ibsa ministrii dhimma alaa Emireetiif ennaa deebii kennan, mootummaa prezidaant Mohammed Abdullaahii Mohaammed bulchiinsa Yeroo ce’umsaa ti ittiin jedhan.
Yeroon hojii prezidaantichaa Guraandhala 8 sirnaan waan dhumateef filannoon Soomaaliyaa walii galtee dhabiinsa hoogganoota siyaasaa gidduu jiruun boodatti harkifate. Dhaaboliin mormitootaa hangi tokko kan Faarmaajoo jedhamun beekaman Mohammad aangoo akka gad dhiisan gaafatanis isaan garuu hojii isaanii itti fufanii jiru.
Miinisteerri odeeffannoo Osmaan Dubbee Abudaabiin dhiifama akka gaafatu gaafataniiru.
Naannoon Sidaamaa Hundeeffamuun Sirnaan Labsame